योगाभ्यास गर्दा यी कुरामा विशेष ध्यान गर्नैपर्छ Canada Nepal
योगाभ्यास गर्दा यी कुरामा विशेष ध्यान गर्नैपर्छ
क्यानाडा नेपाल कार्तिक १९ २०७८
योगको अभ्यास गर्दा केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ ती पक्षहरूमा चर्चा गरिएको छ, जसले योगको अभ्यास गर्दा सहायता गर्छन् ।
१ आँखा बन्द रहनुपर्छ
मनुष्यको निम्ति देख्न सक्ने क्षमता सबैभन्दा प्रबल हुन्छ । जब तपाईं आफ्ना आँखाहरू बन्द गर्नुहुन्छ, पूरै संसार बिलाउँछ— यदि तपाईंले आफ्नो दिमागमा आफ्नै काल्पनिक संसार निर्माण गर्नुभएको छ भने, त्यो बेग्लै कुरा हो ! यदि कुनै पनि कुरालाई आफूभित्र समाहित गर्नुपर्ने छ भने, आँखाहरू स्वत: बन्द हुन्छन्, किनकि आँखाले हामीलाई बाहिरी संसारमा तल्लिन राख्छन् । यदि तपाईंले आँखा बन्द गर्नुभयो भने, तपाईं अझैपनि सुन्न, सुँघ्न र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, तर आधा संसार बन्द भएको हुन्छ । अतः आँखाहरू बन्द रहेको बेलामा नै कुनै पनि कुरालाई आफूभित्र समाहित गर्ने प्रक्रिया सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । जब तपाईं योग–आसनको अभ्यास गर्नुहुन्छ, तब तपाईं भित्री आयाममा केही गर्न चाहिरहनु भएको हुन्छ, त्यसैले आँखा बन्द राख्नु अपरिहार्य छ ।
२ पेट खाली हुनुपर्छ
योग–आसनहरूको अभ्यास गर्ने क्रममा तपाईंको पेट त खाली हुनुपर्छ नै, साथसाथै आन्द्राहरू पनि खाली रहनुपर्छ । यदि तपाईं आफ्ना ऊर्जाहरूलाई माथितर्फ प्रवाहित गर्न चाहनुहुन्छ भने, ती सबैथोक शरीरबाट बाहिरिएको हुनुपर्छ, जुन यो शरीर होइन । योग अभ्यासहरू व्यायाम होइनन्, यो तपाईंको शरीरलाई पुनर्गठन गर्ने अनि आफूले चाहेअनुसार नै आफूलाई पुन: निर्माण गर्ने विधि हो । त्यसो हुन दिनको लागि शरीरबाहेक अरू केहि पनि रहनुहुँदैन ।
योगमा हुनु भनेको स्वयं सृष्टिकर्तासँग साझेदारीमा हुनु हो— तपाईं सम्पूर्णतया आफ्नै प्रयत्नले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न; तर, तपाईं उनलाई आवश्यक काम गर्न दिनको लागि उचित परिवेश सृजना गर्न सक्नुहुन्छ । जब तपाईंलाई पहिलो पटक निर्माण गरिएको थियो, त्यो तपाईंको रोजाइले भएको थिएन; त्यो वंशाणुगत स्मृतिको कारणले भएको थियो । तर, अब तपाईं आफूलाई एकएक चरण गर्दै पुन: निर्माण गर्न खोजिरहनु भएको हुन्छ— तपाईं जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ, ठीक त्यस्तै नै ।
सृष्टिको स्रोतसँग साझेदारीमा रहनु भनेको विशाल बुद्धिमत्तासँग मिसिनु हो— यस्तो बुद्धिमत्ता, जुन तपाईंले सम्भव छ भनेर कल्पना समेत गर्न सक्नुहुन्न । यदि यस्तो हुनुपर्ने हो भने, कुनै पनि अवरोधहरू हुनुहुँदैन— तपाईंले खानुभएको खाना वा तपाईंको शरीरले उत्पादन गरेको मल, यी दुवै शरीरबाट बाहिरिनुपर्छ ।
३ चिसो पानीले नुहाउनु उत्तम
आफ्नो अभ्यास शुरु गर्नुअघि कोठाको तापक्रमभन्दा ५-६ डिग्री कम तापक्रमको पानीमा डुबुल्की लगाउनु वा शरीरमा पानी खन्याउनु सबैभन्दा उचित हुन्छ । यदि तपाईंले यसो गर्नुभयो भने, छालाका कोषिकाहरूबिच हुने छिद्रहरू खुल्दछन्, जुन योग–अभ्यासको निम्ति अपरिहार्य हुन्छ, किनकि हामी शरीरमा रहेका कोषिकाहरूको संरचनालाई एकदमै फरक आयामको ऊर्जाले भरिपूर्ण बनाउन चाहिरहेका हुन्छौँ । एकजना व्यक्तिको दाँजोमा अर्को व्यक्ति असाध्यै जीवन्त देखिनुको कारण पनि यही हो । जब कोषिकाहरूको संरचना ऊर्जाले भरिपूर्ण हुन्छ, यो निकै लामो समयसम्म ऊर्जावान् रहिरहन्छ ।
४ सुखम् स्थिरम् आसनम्
योग सुत्रमा भनिएको छ: सुखम् स्थिरम् आसनम् । योग–आसनहरूको अभ्यास गर्नुको अभिप्राय भनेको यस्तो अवस्थामा पुग्नु हो, जहाँ तपाईंको आसन आरामदायक र स्थिर हुन्छ । त्यस अवस्थामा तपाईं जतिसुकै घण्टा बस्नुभयो भनेपनि, भित्र कुनै पनि खलबली नपुऱ्याइकन तपाईंको शरीर त्यही स्थितिमा रहिरहन्छ । र, यही अवस्थामा तपाईंको बोध–क्षमता बढदै जान्छ ।
योग दैनिक रूपमा गरिनुपर्छ वा हप्तामा दुईपटक गरिनुपर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन । हामी शरीरलाई यस प्रकारले परिष्कृत गर्न चाहिरहेका हुन्छौँ, ताकि नयाँ आकार दिन सकौँ । तसर्थ, आफूमाथि आवश्यक कार्य गर्नको लागि तपाईंसँग जति समय छ, तपाईंले त्यति समय यसमा समर्पित गर्नुपर्छ ।
शरीर केवल माटो हो । तपाईंका कर्महरूको संरचनाले यसलाई पकाउँछ अनि यो ठोस बन्दछ । यसरी स्थापित भएको स्मृतिलाई नै कर्म भनिन्छ । त्यही स्मृतिको भण्डारले गर्दा नै शरीर र मनको स्तरमा हुने कुराहरू ठोस बन्दै जान्छन् । हामी त्यसैलाई उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ । योग–आसनहरू गर्नुको ध्येय के हो भने, तपाईं शरीरसँग यति गहिराइमा काम गर्नुहुन्छ कि केही समयपछि यो पुन: काँचो माटो जस्तै रहनेछ । त्यसबेला, ऊर्जाहरू सजिलै गतिशील हुने भएकाले तपाईं यसलाई आफूले चाहेको आकार दिन सक्नुहुन्छ ।
५ ऐना हेर्नु र सङ्गीत सुन्नु हानिकारक
तपाईंले हठ–योग अभ्यास गर्दा कहिल्यै पनि ऐना वा सङ्गीतको प्रयोग गर्नुहुँदैन । ऐनाको प्रयोग गर्ने प्रचलन जिम्न्यासियम (जिम) बाट आएको हो, किनकि उनीहरू आफ्ना शरीरको प्रशंसा गर्न चाहन्छन् । योगमा त्यस्तो मनोवृत्ति पटक्कै हुनहुँदैन । यदि तपाईंले थुप्रै योगीहरूलाई हेर्नुभयो भने, उनीहरूको शारीरिक संरचना कुनै खेलाडीको जस्तो हुँदैन— उनीहरू एकदमै सामान्य देखिन्छन् । उनीहरूमध्ये थुप्रैको त पुट्ट भुँडी पनि निस्किए हुन्छ, किनकी उनीहरू कहिल्यै पनि आफूलाई ऐनामा हेर्दैनन् ! उनीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्नो भित्री आयाममा माथि अनि अझ माथि जानु हो ।
यदि तपाईं आफूभित्र रहेको सृष्टिको स्रोतको सहकार्य चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको शरीर, मन र ऊर्जा पूर्णतया संलग्न हुन आवश्यक छ । जब तपाईं ऐनामा हेर्नुहुन्छ, के तपाईं आफूलाई मात्र हेर्नुहुन्छ ? होइन । तपाईं अरू सबैलाई हेर्नुहुन्छ, होइन त ? आसनको अभ्यास गर्ने क्रममा तपाईंको मानसिक ध्यान केन्द्रित हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
प्राचीन योगको अभ्यास गर्नको लागि तपाईंको शरीर, मन, ऊर्जा अनि अन्तस्करण विशेष रूपमा संलग्न रहनुपर्छ । जबसम्म तपाईं शत–प्रतिशत रूपमा संलग्न रहनुहुन्न, त्यो जुन सृष्टिको स्रोत हो, जसलाई हामी प्राय: दिव्य भन्ने गर्छौँ, उनले तपाईंलाई साथ दिन सक्दैनन् । यदि तपाईं अलिकति पनि हिच्किच्याउनु भयो वा विचलित हुनुभयो भने, तपाईंको लागि दिव्यता उपलब्ध हुँदैनन् ।
६ अभ्यास गर्दा बोल्नुहुँदैन
आसनहरूले ध्यानको अवस्थामा रहन सहायता गर्छन् । तपाईं यत्तिकै स्थिर भएर रहन नसक्नु भएकोले नै ध्यानको अवस्थामा पुग्नको लागि अरू केहीको सहायता लिइएको हो । जुन स्थिति सबैभन्दा आरामदायक र स्थिर हुन्छ, त्यही तपाईंको आसन हो । जब तपाईंको शरीर सहज स्थितिमा रहन्छ, तपाईंको मन पनि सहज अवस्थामा हुन्छ अनि तपाईंका ऊर्जाहरू पूरै जीवन्त एवं सन्तुलित हुन्छन् । त्यसबेला, तपाईं यत्तिकै बस्नुभयो भने, तपाईं स्वत: ध्यानको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ । यत्तिकै स्वाभाविक रूपमै ध्यानमग्न रहनको लागि योग–आसन प्रारम्भिक चरण हो ।
तसर्थ, यदि तपाईं बोल्नुभयो भने, शरीरमा मात्रै नभई ऊर्जाहरूको स्तरमा पनि थुपै कुराहरू नाटकीय ढङ्गले बदलिन्छन् । त्यसैले, योग–आसनहरूको अभ्यास गरिरहेको बेला नबोल्नु भनेको मानक मात्रै होइन— यो नियम हो । कुनै पनि आसनमा रहँदा तपाईं कहिल्यै पनि बोल्नुहुँदैन, किनकि तपाईंको ध्यान, श्वास र तपाईंको ऊर्जा प्रणालीमा जे भइरहेको छ, यी सबैथोक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ—तपाईं बोल्नुभयो भने, पूरै प्रणाली खलबलिन्छ । यदि तपाईं बोल्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया आसनहरूको अभ्यास नगर्नुहोस्— बरु अरूसँग हिँड्दै जगिङ्ग गर्नुहोस् !-सदगुरुको प्रवचनमा आधारित
कार्तिक १९, २०७८ शुक्रवार ०७:३१:३१ बजे : प्रकाशित
कस्ता व्यक्तिले भटमास खान हुन्छ, कस्ताले हुँदैन
काठमाडौं - हाम्रो भान्सामा सजिलै पाइने गेडागुडी भटमास हो। यसमा माछा, मासु र फलफुलमा जत्तिकै प्रोटिन प्रशस्त पाइन्छ । भिटामिन ए पनि प्रसस्त पाइने भटमासको दाल बनाएर होस् या भुटेर खानु राम्रो हुन्छ ।
यसको नियमित सेवनले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ । यसमा अत्यधिक प्रोटीन पाइने हुनाले यसको सेवन हाम्रो स्वास्थ्यको लागी फाइदाजनक छ । भटमास केही बिरामीको लागि फाइदाजनक हुन्छ भने केहीको लागि बिष पनि बन्न सक्छ ।
यस्ता व्यक्तिले भटमास खानु राम्रो
शरीरलाई फिट राख्न चाहने मानिसहरुको शरिरलाई प्रोटीन चाहिने हुनाले भटमासको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । यदि तपाई आफ्नो लामो,बाक्लो र चम्किलो कपाल बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै देखि नियमित रुपमा भटमास प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । भटमासमा अधिक मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ जसले कपाललाई बाक्लो र चम्किलो बनाउन मदत गर्छ। यस्तै थोरै समय घुमफिर गर्ने बित्तिकै रिगाटा लाग्ने वा कमजोरी महसुस हुनेले पनि भटमास सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
यस्ता व्यक्तिले भटमास खानुहुँदैन
केहि रोगका बिरामीका लागि भने भटमास त्यति लाभदायक मानिदैन । यदि तपाइलाई छालाको समस्या छ भने भटमास नखानुहोस् । यस्तो समस्या हुँदा भटमास खाएमा छाला झन चिलाउने हुन्छ ।
त्यस्तै गर्भवती वा स्तनपान गराइरहेकी महिलाले पनि भटमासको सेवन गर्नुहुदैन । यस्ता महिलाले भटमास सेवन गरेमा रिंगटा हुने र दुध पिउदा शिशुमा अपच हुने समस्या हुन सक्छ । त्यस्तै मूत्राशयकोक्यान्सर र मधुमेह भएकाले पनि भटमासको सेवन गर्नुहुदैन । त्यस्तै मिर्गौला सम्बन्धी रोग भएकाले पनि भटमास सेवन गर्नुहुदैन । यस्ता समस्या भएकाले भटमास सेवन गरेमा गम्भिर समस्या झेल्नुपर्छ ।
मंसिर ६, २०७८ सोमवार २२:०४:४५ बजे : प्रकाशित
जाडो मौसममा अदुवा खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा
काठमाडौं । हरेक नेपालीको भान्छामा दिनहु अदुवाको प्रयोग गरिन्छ । अदुवा खानालाई स्वादिस्ट बनाउनको लागि मात्र नभई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । अदुवामा पाइने विभिन्न पोषण तत्वका कारण अहिले मानिसहरुले विभिन्न समस्या समाधानको लागि पनि प्रयोग गर्छन् ।
अदुवामा एन्टिफंगल, एन्टिब्याक्टेरियल तत्व पाइन्छ जसले शरीरमा विभिन्न संक्रमण हुनबाट जोगाउँदछ। अदुवाले मानव शरीरमा रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमता वृद्धि गराइ शरीर स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्दछ । अदुवाका यी केहि फाइदा बारे जान्नुहोस्
दम खोकीमा : एक चम्चा अदुवाको रसमा एक चम्चा मह मिसाएर बेस्सरी फिटेर विहान/वेलुका मनतातो हुने गरी तताएर खाने गरेमा खोकि ठिक हुन्छ ।
उल्टी : अदुवा र प्याजको रस समान मात्रामा मिलाएर ३-३ घण्टाको अन्तरमा १-१ चम्चा लिनाले अथवा अदुवाको रसमा मिश्री मिलाएर पिउनाले उल्टिहुन तथा जिउमा असजिलोहुन बन्द हुन्छ ।
हृदयरोग : अदुवाको रस पानीमा बरावरी गरी मिलाएर पिउनाले हृदयरोगमा फाइदा हुन्छ। अदुवाको सेवनबाट मुटु मजबुत हु्न्छ।
भोक नलाग्ने समस्या : अदुवाको रसमा कागती र सिधेनुन मिलाएर सेवन गरेमा जठराग्नि तीव्र हुन्छ र त्यसले भोक जाग्दछ।
पेट को ग्यास :आधा-चम्मच अदुवाको रसमा हिंग र कालो नुन मिलाएर खाएमा पेटमा ग्यासको समस्या रहन्न।
रुघा-खोकी : २० ग्राम अदुवाको रसमा २ चम्मच मह विहान वेलुका लिएमा फाइदा गर्दछ । वात-कफ प्रकृतिवालाको लागि अदुवा र पुदीना विशेष लाभदायक हुन्छ ।
खोकी र सासको रोग :अदुवा र तुलसीको रसमा मह मिलाएर पिउँदा खोकी र सासको रोग निको हुने विश्वास गरिन्छ।
भोक नलागेमा वा पेट सफा नभएमा : भोक नलागेमा अदुवाको बारीक मा नुन मिलाएर आठ दिन सम्म दिनमा एक पटक खाने गरेमा पेट सफा हुन्छ । पेट सफा भएका कारण भोक जाग्ने समेत गर्दछ
मंसिर ७, २०७८ मंगलवार २०:१०:०२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - हाम्रो शरिरलाई धेरै नै फाइदा गर्ने गेडागुडी चना हो । भुटेर होस् या भिजाएर काचै खाँदा पनि निकै स्वादिष्ट हुने गर्छ । धेरैले चनालाई दिउँसो खाजाको रुपमा पनि खाने गर्छन् । तर खाजा खाँदा मात्र नभई बिहान भिजाएको चना खाएमा हाम्रो शरिरको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । पोषणको मात्रा बढि हुने चनामा प्रोटिन, फाइबर, लवण तथा भिटामिनहरु प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
विभिन्न रोग सँग लड्ने क्षमता राख्ने चनाले मुटुलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । यस्तै भिजाएको चनाको सेबनले कोलेस्ट्रोललाई पनि नियन्त्रणमा राख्छ । जसले गर्दा कुनै पनि मुटु सम्बन्धी रोग लाग्न पनि पाउँदैन।
भिजाएको चनामा फाइबर हुने हुनाले यसको सेबनले पाचन तन्त्रलाई राम्रो बनाउँछ । यसमा फलामाको राम्रो स्रोत हुने हुनाले रगतको कमी हुन पनि दिदैन । यसले पाचन क्रियालाई सन्तुलित पार्दै कब्जियत पनि हटाउँछ ।
भिजाएको चनामा गुड़ मिसाएर खानाले पटक–पटक पिसाब लाग्ने समस्यामा राहत हुन्छ । भिजाएको चना नियमित खानाले खानाले छाला स्वस्थ हुन्छ। यस्तै यसको सेवनले प्रजनन क्षमता तथा शुक्रकिटको गुणस्तर बढाउँछ । शरिरको तौल बढाउन पनि यसले धेरै सहयोग गर्छ ।
मंसिर १२, २०७८ आइतवार २०:३०:२१ बजे : प्रकाशित
जाडोमा मरिचको सेवन गर्नु फाइदाजनक, बिग्रेको रुघाखोकी लगायत धेरै समस्याको समाधान
काठमाडौं - हाम्रो भान्सामा सजिलै पाइने खाद्य पदार्थ हो मरिच । पिरो विशेषता भएपनि शरीरलाई हानि नगर्ने मरिचलाई मसलाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यसको सहि प्रयोग गर्न जानेमा धेरै रोगको उपचारमा सहयोग हुन्छ ।
खासमा हामिले मरिचलाई भान्सामा मसलाको रुपमा प्रयोग गरिए पनि यसले रोग निको पार्न सहयोग गर्छ । औषधीय गुण हुने मरिचको सेबनले ज्वरो, रुघाखोकी, पाचनप्रणाली दुर्बलता लगायतका समस्याको समाधान गर्छ ।
जाडोमा मरिचको सेवन निकै लाभदायक मानिन्छ । यदि रुघाखोकी लागेमा १०–१५ दाना फुराएको मरिच पिनेर फिटेर नित्य सेवन गर्ने गरेमा बिग्रेको रुघाखोकी १ हप्तामा नै ठीक हुन्छ । यस्तै पिनास भएमा, रुघा लागेमा, टाउको दुखेमा पनि २५ दाना मुनक्का दाखको गेडा २५–३० दाना मरिच हालेर पिँध्नुहोस् र त्यसलाई दुई ग्लाँस पानीमा पकाउनुहोस् घटेपछि रोगीलाई खान दिएर सिरक ओडेर सुत्न लगाउनुहोस् ।
घाँटी बसेर बोल्नै नसक्ने भएको छ भने पनि १०,१२ पात तुलसी ४,५ दाना मरिच र मिश्रीको टुक्रासँग चपाएर निल्दा घाँटी बसेको ठिक हुन्छ । यदि तपाइको दाँत कीराले खाएको छ भने दाँतको प्वालमा कपुर हाल्नाले दाँत दुख्न बन्द हुन्छ । त्यस्तै मरिचको धूलो, खयर, कपुर बराबर पिधेर दाँत माजेमा गिजापाक्ने, दाँत हल्लिने, कीराले खाएको ठीक हुन्छ ।
कम्मर दुख्ने समस्या पनि मरिचले समाधान गर्छ । आधा पाउ भुटेको कालो तिल, १० ग्राम घोडताप्रे, १० ग्राम धूलो मरिच, १० ग्राम सूठो धूलो, १० ग्राम धूलो पिप्ला, ५ ग्राम फुराएको हिङको धूलो सबै मिसाएर सिसीमा राख्ने र दुख्न सुरु भएपछि ३ पटक धूलोलाई मिश्री पानीमा पकाएर खाएमा ठिक हुन्छ ।
मंसिर १६, २०७८ बिहिवार २१:५६:२१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - तिल नेपालमा प्रयोग गरिने एक तेलहन बाली हो। तिललाई धार्मिक रूपले पनि उच्च मर्यादा दिइएको भने स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक छ । तिल ३ प्रकारका छन् कालो तिल, सेतो तिल र झुसे तिल ।
यी ३ मध्ये कालो तिल हाम्रो स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक मानिन्छ । कालो तिलको प्रयोगले चायाँ, पोतो वा दाग, कालो घब्वा सजिलै हटाउन सकिन्छ । यस्तै कम्मर दुख्ने समस्या छ भने कालो तिलको प्रयोगले ठिक गर्न सकिन्छ ।
कम्मर दुखेमा - आधा पाउ भुटेको कालो तिल, १० ग्राम घोडताप्रे, १० ग्राम धूलो मरिच, १० ग्राम सूठो धूलो, १० ग्राम धूलो पिप्ला, ५ग्राम फुराएको हिङको धूलो सबै मिसाएर सिसीमा राख्ने र दुख्न सुरु भएपछि ३ पटक धूलोलाई मिश्री पानीमा पकाएर खाँदा यो समस्या कम हुँदै जान्छ ।
मुखमा पोतो - जीरा, बोके जीरा, कालो तिल, सरस्यूँ र रायो सबैको चूर्ण बराबर मिसाएर दूधमा फिटेर बेलुका सुत्ने बेलामा पोतो वा दागमा लगाएमा पनि ठिक हुँदै जान्छ ।
मंसिर १९, २०७८ आइतवार २०:२२:२४ बजे : प्रकाशित
# कालो तिल